Cunnada Dugsiga - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Riix halkan si aad u hesho liiska dhammaan dugsiyada degmooyinka Oregon oo xiriir la leh qorshahooda cuntada inta lagu jiro xidhitaanka dugsiga Coronavirus. Uma baahnid inaad dhigato dugsigaas gaarka ah ama degmadaas si aad u hesho cuntooyinkan-cunto bilaash ah ayaa loo heli karaa carruurta da'doodu tahay 1-18 si ay u qaataan qaabka "qabso oo aado".
Iyadoo gaajada ay si joogto ah uga sii yaraanayso Oregon, waxay ahaanaysaa mid si joogto ah u sareysa.
Sida cusub Warbixinta USDA ee ku saabsan haqab-beelka cuntada ee Maraykanka ku dhawaad ​​mid ka mid ah todobadii qoys (14.6 boqolkiiba) ee Oregon waxay ahaayeen "cunto aan sugnayn" intii u dhaxaysay 2014-16.
Tani waxay saamaysaa 620,000 Oregonian ah, iyo in ka badan 316,000 oo carruur ah, halkaas oo 1 ka mid ah 4tii carruur ah ee ka soo jeeda guryaha dakhligoodu hooseeyo ay halis ugu jiraan gaajo oo ay u qalmaan barnaamijyada nafaqeynta.
Waxaan fahamsanahay saameynta jireed, shucuureed, iyo garashada ee la'aanta nafaqo ku filan carruurta. Quraacda ama qadada qayb ka mid ah oo la boodo ayaa laga yaabaa inay u horseeddo ilmaha inuu dareemo wareer iyo walaac inta lagu jiro imtixaanka akhriska ee fasalka saddexaad. Muddo ka dib, waxaan ognahay in ilmahan laga yaabo inuu dib uga dhaco heerka fasalka, oo ugu dambeyntii laga yaabo inuusan ka qalin jebin dugsiga sare sababtoo ah la'aanta nafaqada iyo tamarta lagama maarmaanka ah inta lagu jiro socdaalkooda waxbarasho ee dugsiga.
Helitaanka cunto nafaqo leh oo caafimaad qabta oo carruurtu waxay ka jirtaa qaybta USDA ee Barnaamijyada Nafaqeynta Carruurta ee ay ku jiraan Barnaamijka Quraacda Dugsiga (SBP), Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka (NSLP), iyo Barnaamijka Cuntada iyo Cunnada Dugsiga Kadib (ASMSP).
Waxaan la shaqaynaa la-hawlgalayaasha bulshada oo ay ku jiraan Waaxda Waxbarashada ee Oregon, si loo shaaciyo oo loo ballaariyo ka-qaybgalka barnaamijyadan nafaqeynta iyadoo loo marayo kaalmo farsamo, qalab gaar ah iyo suuqgeyn, iyo barnaamijyo si gaar ah loo naqshadeeyey si kor loogu qaado ka qaybgalka.
Arday kasta waa lagu soo dhawaynayaa inuu ku raaxaysto cuntada dugsiga. Haddii qoysku bixiyo ama uu xaq u leeyahay cunto bilaash ah, cuntada lagu bixiyo dugsiga waxay la kulmeysaa habraacyada nafaqeynta ee ka caawiya dhammaan carruurta iyo kurayda inay koraan oo bartaan.
Ka hooseeya 185% heerka saboolnimada federaalka
Carruurta qoysaskooda ay haystaan ​​dakhli ka hooseeya 185% ama ka hooseeya heerka faqriga federaalka waxay heli karaan cunto bilaash ah, maadaama gobolka Oregon uu daboolayo "qiimaha la dhimay" ee kharashka wada-bixinta ee qoysaska. Qoysaska ka badan 185% saboolnimada ayaa bixiya qiimaha buuxa ee quraacda iyo qadada dugsiga.
Daryeel la'aan ama Hoy la'aan
Carruurta hoylaawayaasha ah ama ku jira daryeelka korinta sidoo kale waa u qalmaan.
Hel faa'iidooyinka SNAP ama TANF
Haddii qoyskaagu uu dheefo ka helo Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP) ama Kaalmada Ku Meel Gaarka ah ee Qoysaska Baahan (TANF), iyadoon loo eegin qaddarka, waxaad u qalmi doontaa cunto dugsiyeed bilaash ah. Haddii aadan ku jirin SNAP, ama aadan weligaa codsan SNAP ama cuntada dugsiga, ilmahaagu waxa laga yaabaa inuu weli xaq u yeesho quraac iyo qado bilaash ah dugsiga iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyskaaga.
Yaa maamuli kara Barnaamijyada Nafaqeynta Dugsiga?
Dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee aan macaash doonka ahayn, Residential Child Care Institutions (RCCI)
Dhammaan dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay (dugsiga sare iyo hoos), iyo Residential Child Care Institutions (RCCI) way ka qayb qaadan karaan. Ka qaybqaadashadu waxay u ogolaataa dugsiyada inay helaan kaalmo lacageed quraac kasta, qado ama cunto fudud oo la bixiyo. Soo noqoshada, barnaamijyadu waxay bixiyaan cunto waafaqsan heerarka nafaqada ee USDA waxaana kormeera Waaxda Waxbarashada ee Oregon (ODE).
Barnaamijka Quraacda Dugsiga
Barnaamijka Quraacda Dugsiga (SBP) Waxay siisaa lacag-celin federaali ah bixiyeyaasha ka shaqeeya barnaamijyada quraacda ee aan faa'iido doonka ahayn ee dugsiyada iyo xarumaha daryeelka carruurta ee la deggan yahay.
Barnaamijka waxaa maamula heer federaal ah USDA iyo heer gobol oo ay maamusho Waaxda Waxbarashada ee Oregon.
Partners for a Hunger-Free Oregon waxay la shaqeeyaan Waaxda Waxbarashada Oregon iyo la-hawlgalayaasha kale ee bulshada si ay u shaaciyaan Barnaamijka Quraacda Dugsiga oo ay taageeraan dugsiyada ka qaybqaata.
Waxaan aqoonsanaa fursadaha horumarinta barnaamijka Quraacda Dugsiga anagoo kaashanayna bixiyayaasha halkan Oregon iyo la socodka dadaalka gobolada kale. Waxaan u doodnaa horumarintan anagoo adeegsanayna isbeddelka siyaasadda gobolka iyo federaalka, sida kan 2015 Quraacda ka dib biilka Bell.
Faa'iidooyinka carruurta, qoysaska, iyo dugsiyada
1. Carruur badan ayaa maalinta quraacda ku billaaba
Ardeydu waxay helayaan bilaw dheeli tiran nafaqeyn maalintooda si ay maskax ahaan, jir ahaan iyo bulsho ahaanba u fiicnaadaan.
2. Ka weyn garashada iyo caafimaadka
Ardeydu uma badna inay ku halgamaan tacliin ahaan ama ay la kulmaan arrimo caafimaad.
3. Helitaanka oo kordhay
Qoysasku waxay wajahaan caqabado ah in ay quraacda ubadkooda siiyaan, oo ay ku jiraan miisaaniyad cunto adag ama shaqada subaxda hore, baabuurka, ama jadwalka baska; SBP waxay siisaa ikhtiyaar caafimaad qaba oo ay heli karaan carruurtooda.
4. Ka qaybqaadashada weyn ee waxbarashada
Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in ardayda quraacda ay kordhiyaan buundooyinka xisaabta iyo akhrinta, inay ku fiicnaadaan imtixaannada caadiga ah, oo ay hagaajiyaan xawaaraha iyo xusuusta labadaba imtixaannada garashada. Waxa kale oo la tusay inay si togan u saamayso maqnaanshaha, daahitaanka, booqashooyinka kalkaalisada, iyo shilalka habdhaqanka.
5. Barnaamijyada nafaqaynta carruurta oo xooggan
Waaxyaha nafaqeynta cuntada ee dugsiga ayaa ka faa'iideysta dhaqaale ahaan marka ay awoodaan inay carruur badan oo u baahan la gaaraan quraacda dugsiga; ka qaybqaadashada korodhay waxay caawisaa abuurista dhaqaale miisaan leh, iyo ikhtiyaarada sida Bixinta 2 iyo Bixinta U-qalmitaanka Bulshada waxay caawisaa bixinta lacag celinta dawladda dhexe si ay u taageerto barnaamijyada xooggan.
Dugsiyada dalka oo dhan waxay ogaadeen in caruur aad u badan ay cunaan quraacda marka la bixiyo gambaleelka ka dib iyo lacag la'aan dhammaan ardayda, marka ay suurtagal tahay. Bixinta quraacda iyada oo qayb ka ah maalinta dugsiga, dugsiyadu waxay baabi'in karaan caqabadaha sida jadwalka baska iyo ceebaynta ka hor istaagta ardayda cunista cuntadan muhiimka ah. Ururo badan ayaa abuuray qalab si ay u caawiyaan macalimiinta, dugsiyada iyo u doodayaasha kor u qaadida quraacda dugsiga.
Waaxda Waxbarashada ee Oregon Quraacda Buugga Fasalka
La wadaag Awoodeena Xarunta Dhaqanka ugu Fiican
Xarunta Waxqabadka iyo Cilmi-baarista Cuntada cilmi baaris iyo qalab quraacda dugsiga
Wax Ka Baro Loolanka Quraacda Dugsiga Noofambar
Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka
Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka waxa uu u adeegaya carruurta dalka oo dhan tan iyo markii Koongarasku meel mariyay Xeerka Qadada Dugsiga Qaranka ee 1946 si looga jawaabo nafaqo-xumada carruurnimada ee baahsan. Barnaamijku wuxuu ujeedadiisu tahay in la siiyo cunto nafaqo leh carruurta da'da dugsiga iyo in la taageero qiimaha cuntada iyadoo la gelinayo dakhliga beeraha nidaamka cuntada dugsiga. Barnaamijka waxaa maamula heerka Federaalka USDA iyo heerka gobolka Waaxda Waxbarashada ee Oregon.
Barnaamijka xaq u lahaanshaha federaalka oo siiya dugsiyada kaalmo lacageed oo qiima jaban, cunto caafimaad leh
Cuntooyinka waa in ay buuxiyaan xeerarka nafaqeynta ee dawladda dhexe
Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo cuntada, maamulka iyo kharashaadka shaqaalaha
Dugsiyada ka qaybgalaya waxay kaloo USDA ka heli karaan raashin badeecooyin ah oo deeq ah
Helitaanka qado dheellitiran, nafaqo leh oo ay ku jiraan miraha, miraha, khudaarta iyo caanaha
Waxqabadka tacliimeed ee la hagaajiyay, xooga saarista iyo dhibaatooyinka habdhaqanka oo yaraada
Ka qayb qaadashada barnaamijka waxay kaa caawin kartaa horumarinta caadooyinka cunto cunid ee wanaagsan
Faa'iidooyinka Dugsiyada iyo Barnaamijyada:
Kharashka lacagta caddaanka ah ee dugsiyada
Siyaasadaha fayoobida ee lagu caawinayo dugsiyada inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka buurnida iyo kor u qaadista dhaqdhaqaaqa jirka
Barnaamijka Cuntada iyo Cuntooyinka Dugsiga Kadib
Barnaamijka Cuntada Fudud ee Dugsiga Kadib (ASMSP) wuxuu bixiyaa kharashka u-qalmitaanka barnaamijyada kobcinta dugsiga ka dib ee u adeega cunto ama cunto fudud oo bilaash ah carruurtooda.
ASMSP waa kordhinta Barnaamijka Xannaanada Carruurta iyo Dadka Waaweyn, waxaana mararka qaarkood loogu yeeraa barnaamijka "Khat-kulanka" ama "Cashada". Dhammaan cuntooyinka iyo cuntooyinka fudud waxa la siiyaa lacag la'aan dhallinyarada si ay uga qaybqaataan barnaamijyada kobcinta dugsiga ka dib.
Jidh Adag: Horumari caafimaadka iyo fayoobida carruurta aad u adeegto. Cuntooyinka fudud iyo cunnooyinka waa kuwo nafaqo ahaan isku dheeli tiran oo u oggolaanaya carruurta inay sida ugu badan uga helaan barnaamijka kobcintaada
Maskax XooganMarkay carruurtu yimaadaan barnaamijyadaada waxa laga yaabaa inay ahayd 3-4 saacadood cuntadoodii ugu dambaysay, taasoo adkaynaysa inay xoogga saaraan ama bartaan. Barnaamijkani waxa uu hubinayaa in ardaydu ay sii wadaan horumarka xataa ka dib marka gambaleelka dugsiga la garaaco.
Bulshooyinka Xoogan: Barnaamijyada dugsiga ka dib waxay bixiyaan jawi badbaado leh, oo la kormeero inta lagu jiro wakhti dhalinyaro badani haddii kale ay ahaan lahaayeen guriga keligood, ama waddada.
Faa'iidooyinka Barnaamijyada Dugsiga Kadib
Waxay xoojisaa oo ilaalisaa barnaamijyada:
Bixinta cunnooyinka iyo cuntooyinka fudud waxay noqon karaan kuwo qaali ah, taasoo ka tagaysa maamulayaasha barnaamijka doorasho adag oo u dhexeeya quudinta carruurta iyo bixinta waxqabadyo kobcin. ASMSP waxay kaa caawin kartaa inaad samayso labadaba, adoo badbaadinaya kumanaan doolar oo cunto ah iyo cunto fudud kuwaas oo maalgelin kara hawlaha barnaamijka.
Kala Duwanaanshaha Maalgelinta:
Barnaamijka cuntadu waa qalab fiican oo loo isticmaalo soo dhawaanshaha maalgeliyayaasha mustaqbalka. Ku darida tan oo qayb ka ah miisaaniyada lacag ururintaada waxay tusinaysaa maalgeliyayaasha suurtagalka ah rabitaankaaga inaad ka faa'iidaysato dhammaan agabyada jira ee bulshadaada. Waxa kale oo ay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay caafimaadka guud iyo fayoobaanta carruurtaada.
Goobtu waa inay ku taal xadka ka qayb galka dugsiga halkaasoo ugu yaraan 50% carruurtu ay xaq u leeyihiin qado bilaash ah oo la dhimay (F/R).
Iskuulada, kaniisadaha, guryaha dabaqyada, xarumaha bulshada, naadiyada wiilasha iyo gabdhaha, wakaaladaha qabaa'ilka iyo goobaha kale ee ururku waa tusaalayaal goobaha ku haboon.